क – क कसको बढ्यो त हेर्नुहोस् , ७ ओटा कम्पनीहरुको शेयर मूल्य उच्च दरले बढ्यो ? – OnlinePahar
क – क कसको बढ्यो त हेर्नुहोस् , ७ ओटा कम्पनीहरुको शेयर मूल्य उच्च दरले बढ्यो ?
२८ माघ २०७७, बुधबार १५:४८ Basanta Khanal	0 Comments	share bajar
वैशाख २१, काठमाडौं । साताको तेस्रो कारोबार दिन सात ओटा कम्पनीको शेयर मूल्य उच्च दरले वृद्धि भएको छ । यो दिन सबैभन्दा बढी समता लघुवित्त वित्तीय संस्था र महिला लघुवित्त वित्तीय संस्थाको शेयर मूल्य १० प्रतिशतले वृद्धि भएको हो ।
त्यसैगरी बिशाल बजार कम्पनीको शेयर मूल्य ९ दशमलव ९९, राधी विद्युत् कम्पनीको ९ दशमलव ९० प्रतिशत, सिंगटी हाइड्रो इनर्जीको ९ दशमलव ८२ प्रतिशत,युनाइटेड मोदी हाइड्रोपावरको ९ दशमलव ७३ प्रतिशत र रुरु जलविद्युत् परियोजनाको ९ दशमलव ६४ प्रतिशतका दरले वृद्धि भएको हो ।
ती सात ओटै कम्पनीको शेयर मूल्यमा विक्रेताभन्दा क्रेता धेरै भएकाले शेयर मूल्य बढेको हो । समता लघुवित्तको शेयर मूल्य प्रतिकित्ता रू. ६०५, महिला लघुवित्तको रू. ४ हजार १५८,बिशाल बजार कम्पनीको रू. ६ हजार ७८४ पुगेको छ ।
त्यसैगरी राधी विद्युत् कम्पनीको रू. ५७७,सिंगटी हाइड्रोको रू. ४८१, युनाइटेड मोदी हाइड्रोको रू. २४८ र रुरु जलविद्युत् परियोजनाको शेयर मूल्य प्रतिकित्ता रू. ४२१ पुगेको हो ।
← शेयरमुल्यमा उच्च वृद्धि रुरु जलविद्युतको , शेयरमुल्य कति ?
काठमाडौं उपत्यकामा लम्बियो निषेधाज्ञा कहिलेसम्म ? (हेर्नुहोस्) →